ADASAMMA YIEDIE HO ANODISÆ�M
Æ�siane sÉ› adasamma ahunu sÉ›, yÉ›susu onipa, bu no, di no ni a, É›bÉ›ma ahofadie, atÉ›ntenenee ne asomdwoeÉ› ase atim wÉ” wiase yi mu nti,
Æ�siane sÉ› atuateÉ› ne obuo a wÉ”ammu adasamma yiedie yi de anitan ne atirimuÉ”den baeÉ›, na abÉ›hwanyane nnipa ahonim de asetena foforÉ” aba, ama nnipa ani aba wÉ”n ho so sÉ› wÉ”wÉ” ho kwan sÉ› wÉ”ka wÉ”n adwene a ehu biara nni mu, na wÉ”wÉ” ho kwan sÉ› wÉ”yÉ” adwuma na É›nhia wÉ”n, na É›siane sÉ› wÉ”apae mu aka ato dwa sÉ› yei ne nnipa anidasoÉ” titre nti,
Æ�siane sÉ›, É›nsÉ› sÉ› É›ba no sÉ› obi de ahomteÉ› bÉ›yÉ› nneyÉ›É› bi a É›yÉ› nneyÉ›É› a É›twa toÉ” koraa, a onii bÉ›tumi afa so de ako atia anitan ne ahupoo, berÉ› a mmara bÉ” adasamma yiedie anodisÉ›m ho ban nti,
Æ�siane sÉ› É›ho hia sÉ› nnamfofa ba aman ahodoÉ” ntam nti,
Æ�siane sÉ› Amanaman Nkabom Kuo mu nnipa asi wÉ”n gyidie so dua wÉ” Amammuo NnyinasoÉ” no mu, se onipa anim nyam ne boÉ” a É”som no nye adewa na É”barima ne É”baa nyinaa yÉ› pÉ›, na wÉ”awe ahinam so, sÉ› wÉ”bÉ›ma asetena mu ayÉ› yiÉ›, na nnipa atumi atena ase sÉ› anuanom wÉ” ahogono mu nti,
Æ�siane sÉ› aman hodoÉ” a wÉ”fra Amanaman Kuo no mu ate wÉ” ho ase ahyÉ› bÉ” sÉ› wÉ”ne Amanaman Nkabom Kuo de anokorÉ” bÉ›hwÉ› ama obiara adi anodisÉ›m no ni, ama obiara anya n'ahofadie ne ahotÉ” sÉ›deÉ› É›fata no nti,
Æ�siane sÉ› ntease pa a yÉ›bÉ›nya no wÉ” anodisÉ›m a É›fa onipa yiedie ne n'ahofadie ho bÉ›ma yÉ›n bÉ”hyÉ› yi adi mu nti,
ekuo no badwa kÉ›seÉ› no
pae mu ka sÉ›:
Ani da kwan sÉ›:
Saa adasamma Yiedie Ho AnodisÉ›m a wÉ”ada no adie yi bÉ›yÉ› susudua titire baako pÉ› a, É›wÉ” hÉ” ma nnipa ne amanaman nyinaa, na Æ†kÉ”ntÉ›korÉ” anaa fekuo ahodoÉ” nyinaa bÉ›ma adi wÉ”n tirim dÉ›m, abÉ” no dawuro akyerÉ›kyerÉ› aseÉ› yie pa ara, agye ato mu, adi so, na wÉ”de afa wÉ”n ankasa aman ne aman foforÉ” dwumadie nhyehyÉ›É› ahodÉ” so ama ahyeta aman a wÉ”dÉ”m Amanaman Nkabom Kuo ne aman biara a É›hyÉ› n'ase mu.
Nnipa nyinaa yÉ› pÉ›. Na wÉ”de adwene ne nyansa na abÉ” obiara. Æ�no nti, É›sÉ› sÉ› obiara dÉ” ne yÉ”nko, bu ne yÉ”nko, di ne yÉ”nko ni.
Yiedie ho anodisÉ›m mu asÉ›m yi wÉ” hÉ” ma obiara a nyiyimu biara nni mu. Æ�mfa ho sÉ› obi yÉ› tuntum anaa fufuo, É”baa anaa É”barima. Kasa a obi ka, asÉ”re a obi kÉ”, amanyÉ”kuo ko a obi dÉ”m, deÉ› obi fire, adwapadeÉ› a É”wÉ”, n'awosuom ne deÉ› É›keka ho nsi obiara kwan wÉ” saa nhyehyÉ›É› yi ho.
DeÉ› É›ka ho ne sÉ›, É›nsÉ› sÉ› yÉ›to É”man biara a obi firi mu ho, sÉ› É”man ko no di ne ho so anaa É›hyÉ› É”man foforÉ” bi ase.
Obiara wÉ” ho kwan sÉ› É”tena ase asomdwoeÉ› ne ahofadie mu a bÉ”ne biara nka ne nipadua no.
Æ�nsÉ› sÉ› obiara di obi nya. NkoatÉ” ne nkoatÉ”n yÉ› dwadie bi a É›sÉ› sÉ› wÉ”tÉ”re aseÉ› korakora.
Æ�nsÉ› sÉ› obi fa É›kwan bi so hyÉ› onipa dasani biara aniÉ›yaadeÉ›. Anaa É”fa atirimuÉ”den kwan so twa obi asuo, gu n'anim aseÉ›.
SÉ› obiara kÉ”pue mmara anim wÉ” baabiara a, É›sÉ› sÉ› wÉ”gye no to mu sÉ› onipa.
Nnipa nyinaa yÉ› pÉ› wÉ” mmara anim. Mmara bÉ” nnipa nyinaa ho ban pÉ› a nyiyimu biara nni mu. Mmara mu deÉ›, yÉ›nhwÉ› obiara anim.
SÉ› obi bu mmara yi bi so tia É”foforÉ” a, É”wÉ” ho kwan sÉ› É”de no fa mmara kwan so ne no di sÉ›deÉ› mmara seÉ›.
Æ�nsÉ› sÉ› wÉ”kyere obiara kyehunu. Æ�nsÉ› sÉ› wÉ”kyere obiara sie anaa wÉ”twa obi asuo kwa.
SÉ› wÉ”bÉ” obi kwaadu wÉ” biribi ho na wÉ”de onii kÉ” asÉ›nniiÉ› a, É›sÉ› sÉ› wÉ”n a wÉ”bÉ›di asÉ›m no bu atÉ›ntenenee, berÉ› a wÉ”nkyea wÉ”n aso. Æ�sÉ› sÉ› asÉ›nnifoÉ” no yÉ› nnipa a wÉ”n ho nni asÉ›m no mu koraa.
SÉ› wÉ”de so to obi so, nam so kye no, na wÉ”ntumi mfeefee asÉ›m no mu, nhunuu nokorÉ› a É›wÉ” mu a, yÉ›fa no sÉ› onii no nyÉ›É› saa bÉ”ne no, gye sÉ› wÉ”nam mmara kwan so, kÉ” asÉ›m no mu, hunu sÉ› É”di fÉ”. SÉ› wÉ”de no kÉ” asÉ›nniiÉ› mpo koraa a, É”wÉ” ho kwan sÉ› É”hwehwÉ› mmoa biara a É”bÉ›tumi anya de atete ne ho akyiri kwan.
Obiara nni ho kwan sÉ› É”gyina amammara anaa amanaman mmara so de asotwe a É›mfata ma obi wÉ” bÉ”ne bi a onii yÉ›e berÉ› a na saa mmara no nni hÉ” ho. Na sÉ› É›kÉ”ba no sÉ› na asotwe bi wÉ” hÉ” ansa na asotwe foforÉ” a emu yÉ› den sene dada no reba a, É›sÉ› sÉ› asotwe a onii yÉ›É› saa bÉ”ne no na É›wo hÉ” dada no ara na wÉ”de twe no.
Æ�nsÉ› sÉ› obi fa É›kwammÉ”ne so de ne ho hyehyÉ› obi kÉ”koamsÉ›m, n'afisÉ›m anaa n'abusuasÉ›m mu. Æ�nsÉ› sÉ› obi gu obi din ho fi. Mmmara bÉ” onipa biara ho ban sÉ›deÉ› É›bÉ›yÉ› a, biribiara ntumi nsi ne yiedie ho kwan.
Obiara wÉ” ho kwan sÉ› É”tumi kÉ” baabiara, tumi tena baabiara wÉ” É”man biara mu.
Obiara wÉ” ho kwan sÉ› É”tumi tu firi É”man biara mu a ne man ka ho, sane ba ne man mu bio.
SÉ› obi manfoÉ” reteetee no apÉ› no atÉ”re n'ase a, É›yÉ› n'asÉ›deÉ› sÉ› É”dwane kÉ” dwankÉ”bea bi wÉ” É”man foforÉ” bi mu kÉ”bÉ” ne ho adwaa wÉ” hÉ”.
SÉ› obi yÉ› bÉ”ne a É›mfa amanyÉ” ho anaa É›ntia Amanaman Nkabom Kuo nhyÉ›hyÉ›É› a, É›nyÉ› onii no asÉ›deÉ› sÉ› saa mmara yi bÉ” ne ho ban firi saa bÉ”ne no ho.
Æ�yÉ› obiara asÉ›deÉ› sÉ› É”tumi kÉ” oman foforÉ” bi mu kÉ”dane hÉ”ni.
Obiara ntumi mmÉ” ne tirim, mfa asisie kwan so nsakra obi nkyi. SÉ› obi pÉ› sÉ› É”sakra ne nkyi nso a, É›yÉ› n'asÉ›deÉ› sÉ› É”sakra berÉ› a akwansideÉ› biara nni mu.
Æ�yÉ› mmarima ne mmaa a wÉ”anyinyini, aso awadeÉ› asÉ›deÉ›, sÉ› wÉ”ware wowo mma, berÉ› a wÉ”n nipasuo, wÉ”n nkyi ne wÉ”n nyamesom nsi wÉ”n kwan wÉ” wÉ”n awadeÉ› anaa awaregyaeÉ› ho.
SÉ› awareÉ› no bÉ›sÉ” a, gye sÉ› awarefoÉ” baanu no apene so, agye ato wÉ”n ho so sÉ› wÉ”bÉ›ware.
Fidua a É›yÉ› agya, É›na ne mma no nnyinasoÉ” no yÉ› abusuabÉ” nnyinasoÉ” mfitiaseÉ›, na É›yÉ› fidua no asÉ›deÉ› sÉ› É”manfoÉ” bÉ” wÉ”n ho ban.
Æ�yÉ› obiara asÉ›deÉ› sÉ› É”pÉ› É”no ara n'agyapadeÉ›. Æ†tumi nso ne afoforÉ” bom ne wÉ”n pÉ› agyapadeÉ›.
Æ�nsÉ› sÉ› wÉ”de ahupoo anaa nneyÉ›É› a É›nnam mmara kwan soÉ” gye obi agyapadeÉ› firi ne nsam kwa.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”di n'ankasa tirim, dwene n'adwene, kÉ” asÉ”re biara a É”pÉ›. Saa tumi yi ma kwan ma obi tumi sesa n'asÉ”re ne ne gyidie wÉ” badwam anaa kÉ”koam a akwansideÉ› biara mma mu, na É›mfa ho nso sÉ› wÉ”yÉ› nnipa bebree anaa É”yÉ› É”kÉ”ntÉ›korÉ”.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”tumi ka n'adwene wÉ” biribiri ho berÉ› a akwansideÉ› biara nni mu. Afei obiara nso tumi fo É”kwan biara so bÉ” biribi ho dawuro de kyerÉ› n'adwene anaa É”tumi hwehwÉ› nya biribi ho adwene a É›mfa ho sÉ› É”yÉ› É”man ba anaa É”nana.
Æ�yÉ› obiara asÉ›deÉ› sÉ› É”dÉ”m asomdwoeÉ› kuo bi. Æ�kwan nso da hÉ” sÉ› nnipa bi tumi bom hyia a É›nyÉ› bÉ”ne so.
Æ�nsÉ› sÉ› obiara hyÉ› obiara ma É”dÉ”m kuo bi a É”mpÉ›.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› wÉ”rebu ne man anaa wÉ”reka mu asÉ›m a, É”ka bie. Onii no tumi kÉ” mu tee anaa É”tumi fa abatoÉ” a emu da hÉ” kwan so ka bi.
Onipa biara wÉ” ho kwan sÉ› biribiara a ne man mu aban bÉ›yÉ” no, É”nya ne so ne deÉ› pÉ›pÉ›É›pÉ›.
DeÉ› É”manfoÉ” pÉ› na É›sÉ› sÉ› wÉ”n aban yÉ”. WÉ”nam abatoÉ” a dwinim biara nni mu, na obi nhunu ne yÉ”nko abatoÉ” mu, na obiara a wadi mfeÉ› dunwÉ”twe biara to bie so na É›dÉ›di saa dwuma yi.
Æ�yÉ› É”man biara asÉ›deÉ› sÉ› É›bÉ” É”man ba biara ho ban. Æ�sÉ› sÉ› É›nam É”man no ahoÉ”den anaa nkabom bi a saa É”man no ne É”man foforÉ” bi ayÉ” so ma É”man ba biara nya anigyeÉ›, di yie sÉ›deÉ› É”man ko no sikasÉ›m, nnÉ”baeÉ› ne amammerÉ› a É›tumi ma onipa di mu no teÉ›.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”yÉ› adwuma. Adwuma biara a obiara pÉ› sÉ› É”yÉ› no nso, É›nsÉ› sÉ› akwansideÉ› biara ba ho. Æ�nsÉ› sÉ› mmara no bÉ” adwumayÉ”foÉ” ho ban firi adiyie mu, na É›hwÉ› ma wÉ”nya ahotÉ” wÉ” wÉ”n nnwuma mu.
Dwuma korÉ” a obi bÉ›die no so akatua a É›fata na É›sÉ› sÉ› wÉ”tua no a nyiyimu biara nni mu.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”yÉ› adwuma biara a É”pÉ›, nya ne so ne n'akatua a É›bÉ›tumi ama É”ne ne hokafoÉ” ne ne mma atena ase anigyeÉ› mu, sÉ› nnipa, na sÉ› É›yere so koraa a, aban boa no kwan bi so de bÉ” ne ho ban firi ahokyere bi mu.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”te anaa É”dÉ”m adwumayÉ›foÉ” kuo de bÉ” n'adwuma anaa n'ankasa ho ban.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”yÉ› adwuma bi a, É”nya kwan gye n'ahome, na É”tumi yÉ› adwuma nso kÉ”si berÉ› bi. Æ�tÉ” da a, wÉ”ma onii no kwan ma É”di afoofi a wÉ”tua no ka.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”no, ne hokafoÉ” ne ne mma a É›yÉ› fidua no nya ahotÉ” wÉ” wÉ”n asetena mu. NnoÉ”ma a É›de ahotÉ” brÉ› abusua anaa fidua no ne aduane, aduradeÉ›, adan, ayarehwÉ› ne onipa asetenam ahiadeÉ› nyinaa, na mpo sÉ› É›kÉ”ba no sÉ› obi adwuma sÉ›e anaa É”di dÉ›m, anaa É”di kuna, anaa onyini ma no guro, anaa biribiara a É›de É”haw bÉ›ba n'asetena mu a É›nyÉ› ne mfomsoÉ” no, É›yÉ› n'asÉ›deÉ› sÉ› É”nya asetena pa a É›fata.
Æ�sÉ› sÉ› wÉ”ma mmaatan, ne titire no, wÉ”n a wÉ”turu mma ne mmÉ”fra nyinaa nyia mmoa sononko. AbÉ”fra a wÉ”nam aware pa kwan so woo no ne sÉ›be, mpena ba nyinaa yÉ› mmÉ”fra a wÉ”hia hwÉ› pa a nyiyimu biara nni mu.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”kÉ” sukuu kÉ”sua nwoma. MÉ”fraberÉ›m nwomasua no yÉ› adesua ahyÉ›seÉ› a É›nni sÉ› wÉ”tua ho sika koraa. Æ�yÉ› nhyÉ› sÉ› abÉ”fra biara bÉ›kÉ” mfitiaseÉ› sukuu no bi. Æ�sÉ› sÉ› wÉ”buebue mfiridwuma ne nsanodwuma bebree, na sÉ› obi tiri di boa no a, wakÉ”toa so wÉ” suapÉ”n bi mu, berÉ› a nyiyimu biara nni mu.
Adesua ho mfasoÉ” titire ara ne sÉ› onipa bÉ›sua adeÉ› anya mpontuo wÉ” n'asetena mu, ahunu n'asÉ›deÉ›, na wate n'ahofadie ase yie. Æ�ba no saa a, É›bÉ›ma nteaseÉ›, abodwokyÉ›reÉ›, ne nnamfofa abÉ›da aman ne aman, awosuo nu nyamesom mu gyidie ahodoÉ” nyinaa ntam, na aboa ama botaeÉ› a Amanaman Nkabom Kuo de asi n'ani so pÉ› sÉ› asomdwoeÉ› ba wiase afanan nyinaa no adi mu.
Æ�yÉ› awofoÉ” nyinaa asÉ›deÉ› a É›di kan koraa sÉ› wÉ”kyerÉ› adesua korÉ” a wÉ”pÉ› sÉ› wÉ”n mma nya no daakye.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”ma n'ani gye n'amammerÉ› ho, na É”de ne ho hyehyÉ› emu dwumadie nyinaa mu, na É”nya mfasoÉ” a É›firi AbÉ”deÉ›munyansapÉ› mu ba nso.
Æ�yÉ› onipa biara a É”de n'ankasa adwene atwerÉ› anaa ayÉ› biribi de ne din ato soÉ” no asÉ›deÉ› se É”man no hwÉ› bÉ” ho ban ma no na ne brÉ› anyÉ› kwa.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”de anigyeÉ› ne ahosÉ›pÉ› tena ase asomdwoeÉ› mu wÉ” ne man anaa É”man foforÉ” mu, sÉ›deÉ› É›bÉ›yÉ› na deÉ› wÉ”apae mu aka no Amanaman Nkabom Kuo AnodisÉ›m mu no bÉ›di mu.
Æ�yÉ› onipa biara asÉ›deÉ› sÉ› É”de n'ahoÉ”den ne ne nyansa boa ma faako a É”teÉ› tumpon, É›firi sÉ› É›hÉ” na ama wayÉ› sÉ›deÉ› É”teÉ› yi.
Æ�wom sÉ›, É›sÉ› sÉ› onipa biara di ne ho so, yÉ› deÉ› É›bÉ›ma ne ho atÉ” no deÉ›, nanso sÉ›deÉ› É›bÉ›yÉ› a, obi nnya anigyetrasoÉ” a É›de É”haw bÉ›ma n'afÉ›foÉ” no nti, É›sÉ› sÉ› onipa biara di ne man anaa fekuo a É”fra mu mmara so, na ama É”dodoÉ” amammuo asetena abÉ” onipa yiedie ho ban.
Æ�nsÉ› sÉ› obi toto saa asÉ›deÉ› ne ahofadie ho nhyehyÉ›É› ahodoÉ” yi ase ma ne nneyÉ›É› ne Amanaman Nkabom Kuo apÉ›deÉ› no bÉ” abira kwan biara so.
WÉ”anhwÉ› É”man anaa nnipakuo bi ho na É›yÉ›É› saa AnodisÉ›m yi. Ne saa nti, É›nni sÉ› obi bÉ›gyina AnodisÉ›m yi so, ayÉ› biribi ama atia adwempa a É›fa onipa asÉ›deÉ› ne n'ahofadie a Amanaman Nkabom Kuo nya de yÉ›É› saa anodisÉ›m no.